General Saacid oo si rasmi ah ulla wareegay hogaanka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed – Radio Daljir
General Saacid oo si rasmi ah ulla wareegay hogaanka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed
Maajo 11, 2013 9:52 b 0
Muqdisho, May 11, 2013 – Ra?iisal Wasaaraha Xukuumada Federaaliga ah ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid), Gudoomiya Maxkamada Sare Caydiid Ilka Xanaf iyo Wasiirka Arrimaha Guddaha iyo Amniga Qaranka Cabdikariin Xuseen Guuleed, ayaa ka qeyb-galay munaasabada xilwareejinta taliyaaha cusub ee Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed General Cabdixakiim Dahir Saciid (Gen. Saacid) oo xilka kala wareegay General Sharif Shiikhuna Maye.
?Hogaanka cusub ee aan u magacawnay ciidamada difaaca iyo amniga dalku wuxuu qeyb weyn ka yahay dadaalka aan ugu jirno sugida amniga iyo isbadalka cusub ee aan ku doonaynno inan si buuxda ugu xasilino dalka,? ayuu yiri Ra?iisal Wasaaraha oo hadal kooban ka jeediyay munaasabadii xil wareejinta ee ka dhacday dugsiga tabo-barka ciidanka ee General Kaahiye loona yaqaano (Scuola Polizia).
?Waxaan soo dhaweynayaa taliyaha cusub ee CBS, waxaana rajaynayaa in Illaahay u fududeeyo masuuliyada weyn ee uu qaaday. Waxaan kula dardaarmayaa inuu ka hawl-galo kordhinta tirada ciidanka iyo sidii kor loogu qaadi lahaa tayo ahaan,? ayuu yiri Gen. Sahriif Shiikhuna oo ku amaanay ciidanka sida ay naftooda ugu huraan sugida amaanka dalka iyo difaaca xuquuda shacbiga Soomaaliyeed.
Wasiirka Arrimaha Guddaha iyo Amniga Qaranka Mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa mahad gooni ah u soo jeediyay Gen. Sharif Shiikhuna oo uu ku amaanay wada-shaqeyntii ay lahaayeen lixdii bilood ee la soo dhaafay. Waxaana wasiirka iyo Ra?iisal Wasaaruhu goobtaas Bilad Sharaf ku gudoonsiiyeen Gen. Sharif Shiikhuna.
?Waxaan mudnaanta kowaad siinayaa daryeelka ciidanka iyo cadaalad inaan u sameeyo. Askariga aan ku aaminayno masuuliyada illaalinta sharciga iyo amniga waa inuu xaqiisa helo, si aan uga guul gaarno la dagaalanka dambiyada iyo musuq maasuqa, una difaacno xuquuqda shacbigeena ee aan u dhaaranay,? ayuu yiri Gen. Saacid oo si rasmi ah xilka ula wareegay manta.
Ra?iisal Wasaaraha ayaa hadalkii uu ka jeediyay munaasabada xilwareejinta waxaa uu ku xusay taariikhda dheer ee CBS, iyo sida ay laf-dhabar ugu ahaayeen nidaamka dawligaa ee Soomaaliya. Waxaana uu sheegay inay lagama maar-maan tahay inay kaalintaas buuxiyaan sida ugu dhaqsaha badan. Asagoo intaas ku daray in taliska cusub la yimaado qorshe dhamaystiran oo lagu illaalinayo sharniga dalka, iyo amniga iyo sharafta muwaadinka Soomaaliyeed.
Xeerka warbaahinta Puntland oo maantay lagu sameeyay dib u eegid rasmi ah.